UKUHLAWULWA KWETYALA NGOKUBUYISWA NE-EX SHYA L'AMOUR PHAKATHI KOQHAWULO-MTSHATO LWECARDI B - HOLLYWOOD
I-Offset ekuthiwa ibuyile kunye ne-Ex Shya L'amour phakathi kweCardi B uqhawulo mtshato
Ukulinganisa Ngokucacileyo akanankathazo yokutshintsha emva kokunqunyulwa kwakhe Ikhadi B . Emva kokuba iqabane lakhe lifake isicelo sokuqhawula umtshato, ngoku kunikwe ingxelo yokuba ufumene kwakhona ngokudibeneyo kunye nomama wakhe wangaphambili kunye nomama uNicole Algarin a.ok.a. Shya Uthando .
Ngokwe-MTO News, i-Ric Flair Drip spitter ichithe ixesha elininzi no-Shya kunye nentombi yabo eneminyaka emihlanu. Ukuxhasa oku kubhengezwa, imeko yendawo ebonisa ukuba IMigos Inkwenkwezi ibithumela imifanekiso yakhe noShya kunye nomncinci wabo okwangoku.
Ukuqhubeka nokucebisa ngokudibana kwakhona kwabafazi, u-Shya wabelana ngokushicilela okufihlakeleyo malunga nokufumana uthando oluphosakeleyo kwakhona kuphela kwimizuzu embalwa emva kokuba ulwazi luqhawule uqhawulo mtshato luka-Offset no Cardi. Uhlengahlengiso kubomi. Uphulukana nothando. Uphulukana nabahlobo. Ulahlekelwa zizinto zakho ongakhange ucinge ukuba zingahamba, funda isicatshulwa esithunyelwe kumabali akhe e-Instagram.
Kwaye emva koko, ngaphandle kwakho nokuba uyaziqonda, ezi zinto ziza kwakhona, isicatshulwa saqhubeka sifunda, sibonisa utshintsho olwakhayo kubomi bukaShya. Uthando olutsha lungena. Unxulumana nabanye abahlobo. Kwaye womelele, ulumkile ukuba ujonge kwakhona ngaphakathi esipilini.
Malunga nexesha elifanayo lokuqhawula umtshato kukaCardi, uShiya, onokuba ngumqokeleli obhinqileyo, ngapha koko wasungula umculo omtsha kraca ekubonakala ngathi uyayichitha i-hitmaker yeBodak Yellow. Kumculo obizwa Njengam, u-Shya udlwengula ukuba ex-b *** h ufuna ukulwa nam. Uye wamtyhola ngaphambili uCardi ngokuzama ukulwa naye ngaphambili.
Ngeli xesha, uCardi waya kwi-Instagram Live ngolwe-Sihlanu, nge-18 kaSeptemba ukusingatha amarhe ajikeleze ukusikwa kwakhe kwi-Offset. Enkosi kubalandeli ngalo lonke uthando nemithandazo abebemthumelela yona, utshilo, Kodwa ke andiyifuni. Ndilungile. Ndinqwenele ukwazisa ukuba andikhange ndiphalaze nenyembezi.
Umfazi waseBronx wakhanyela ukuba uqhawula umtshato nendoda yakhe yeminyaka emithathu ngenxa yokuba efumene ukukopela kwakhona, esabelana, Ngalo lonke ixesha elinye le ndoda sele ilungile, ke f ** ked up kwaye ibetha imithombo yeendaba, ndingu lonke ixesha ndilila, lonke ixesha ndingonwabanga ngenxa yokuba andiluthandi olohlobo s ** t. Ngeli xesha, ndandingalili.
Kuya kufuneka uyazi ukuba kutheni? Isizathu sokuqhawula kwam umtshato asikuko ukuba akukho nanye kwezo zinto zakha zenzeka ngaphambili kunangaphambili. Ayibangelwa kukunganyaniseki, watsho. Ndibona abantu befana, 'Oo, unomntwana kweyona ndlela ilungileyo.' Yiyo yonke f ** inkosi ubuxoki obupheleleyo. Eli lixesha lesibini abantu abazama ukuphoxa iintsana apha apha. Hayi, ziinkunzi zeenkomo ** t.
UCardi waqhubeka nokuchaza, ndafumana nje ukungathandi kwi-f ** king iphikisana. Ndifumene ukungabinamdla wokungaboni miba ngamehlo. Xa uziva ukhetha ukuba ayifani ngoku, ngaphambi kokuba uqhathwe, ndingahamba ngokumodareyitha.
Igcisa eliphumelele iGrammy longeze i-hypothesis yokuba wafaka uqhawulo-mtshato njengopapasho lwe-albhamu yakhe entsha. Akukho nto iphosakeleyo kweli hlabathi yenzekileyo, ngokwesiqhelo abantu bayaphuhlisa, wavuma. Ndihleli nale ndoda iminyaka emi-4. Ndinomntwana kule ndoda, ndinosapho kunye nale ndoda… ngesiqhelo awunamdla kwiingxoxo kunye nokwakhiwa. Utsalwa ngesiqhelo nangaphambi kokuba kwenzeke into enye, uyavuma.
Izigaba: Umqala Hulu Iwiki
ixesha lokufika ekhaya ngekrisimesi
imipu eshukumayo yabalingisi abancinci
wow ulondolozo lweseva yeklasikhi
cst iminyaka emitsha yokubala